ဇွန်လမှာ မွေးဖွားကြတဲ့ နာမည်ကြီး ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များ - For her Myanmar
ဇွန်လမွေးနေ့ရှင်လေးတွေကို မန်းရှင်းခေါ်ပြီး ဝေမျှပေးလိုက်ပါဦး
ယောင်းတို့ရေ.. ဒီလိုမိုးတွေ တဖြိုင်ဖြိုင်ရွာသွန်းတတ်တဲ့ ဇွန်လမှာ ဘယ်သူမွေးနေ့တွေ ရှိကြလဲဟင် … ကျန်တာတွေတော့ မပြောတတ်ပေမဲ့ ဒီလမှာ မွေးဖွားတဲ့ ယောင်းတို့တွေကတော့ အနုပညာပိုးရှိသူတွေလို့ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူးနော်…. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဇွန်လမှာမွေးဖွားတဲ့ နာမည်ကြီး ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေ အများကြီးကို မင်မင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားလို့ပါ… ဒီတော့ ဘယ်ကိုရီးယား အနုပညာရှင်တွေက ယောင်းတို့နဲ့ မွေးလတူလဲဆိုတာကို မင်မင်နဲ့အတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်…
F4 ကားထဲက ဆံပင်လှိုင်းတွန့်လေးနဲ့ ယောင်းတို့အသည်းကို လှုပ်ခတ်နိုင်ခဲ့သလို City Hunter ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာရရှိထားတဲ့ ဂူဂျွန်ဖြိုးလို့ လူသိများတဲ့ Lee Min Ho ကတော့ ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှာ (၃၂)နှစ်ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်…
Kim Hyun Joong ကတော့ F4 ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပဲ Lee Min Ho နဲ့အပြိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ယောင်းတို့ ဂျီဟိုလို့သိထားသူလေးပါ.. မင်မင်တို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်လောက်က ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ SS501 အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီဟိုကတော့ ဇွန်လ(၆)ရက်နေ့မှာ (၃၃)နှစ်ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်…
Secret Garden ထဲက စတန့်မလေးလို့ ပြောလိုက်ရင် Ha Ji-Won ကို ယောင်းတို့မျက်စိထဲ တန်းခနဲပြေးမြင်ကြမှာပါ.. Ha Ji-Won ကလည်းဇွန်လရဲ့ မွေးနေ့ရှင်လေးတစ်ယောက်ပါပဲ… သူ(မ)ဟာ ဇွန်လ(၂၁)ရက်နေ့မှာ (၃၂)နှစ်ပြည့်တော့မှာတော့ Lee Min Ho နဲ့ အသက်သိပ်မကွာဘူးပေါ့နော်….
Rain ဆိုရင်တော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရှင်းပြနေစရာမလိုဘဲ နာမည်မြင်တာနဲ့ ယောင်းတို့တန်းသိမယ့် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ.. သရုပ်ဆောင်ရာမှာ ပီပြင်သလို သီချင်းဆိုရာမှာလည်း အင်မတန်ထူးချွန်တဲ့ Rain ကတော့ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့မှာ (၃၇)နှစ်ပြည့်တော့မှာပါ..(မထင်ရဘူးနော် တော်တော်နုတာပဲ)
Goblin သရဲစုံတွဲထဲက မင်းသမီးလေးဆို ယောင်းတို့ ကောင်းကောင်းမှတ်မိကြမှာပါ.. လတ်တလောကမှ အပြီးသတ်သွားခဲ့တဲ့ Touch Your Heart ဇာတ်ကားမှာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့ Yoon In-na ကတော့ ဇွန်လ(၅)ရက်နေ့မှာ (၃၇)နှစ်ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်…
ဦးအရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ မင်းသားချော Jin-hee Ji ကတော့ နန်းတွင်းကား တော်တော်များများမှာ မင်းကြီးနေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ… သူကတော့ ဇွန်လ(၂၄)ရက်နေ့မှာ (၄၈)နှစ်ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်….
အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတွေက ဇွန်လမှာမွေးဖွားကြသလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် နာမည်ကြီးကိုရီးယား အနုပညာရှင်တော်တော်များများက ဇွန်လမှာ မွေးဖွားကြတာကို ယောင်းတို့ကိုယ်တိုင် တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီနော်…. ယောင်းတို့နဲ့ မွေးလတင်မက မွေးနေ့ပါ တိုက်ဆိုင်တာမျိုးတွေ့ရင်လည်း မင်မင်တို့ကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးခဲ့ကြပါဦးနော်..
ဇှနျလမှေးနရှေ့ငျလေးတှကေို မနျးရှငျးချေါပွီး ဝမြှေပေးလိုကျပါဦး
ယောငျးတို့ရေ.. ဒီလိုမိုးတှေ တဖွိုငျဖွိုငျရှာသှနျးတတျတဲ့ ဇှနျလမှာ ဘယျသူမှေးနတှေ့ေ ရှိကွလဲဟငျ … ကနျြတာတှတေော့ မပွောတတျပမေဲ့ ဒီလမှာ မှေးဖှားတဲ့ ယောငျးတို့တှကေတော့ အနုပညာပိုးရှိသူတှလေို့ဆိုရငျ မှားမယျမထငျပါဘူးနျော…. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဇှနျလမှာမှေးဖှားတဲ့ နာမညျကွီး ကိုရီးယားအနုပညာရှငျတှေ အမြားကွီးကို မငျမငျရှာဖှတှေရှေိ့ထားလို့ပါ… ဒီတော့ ဘယျကိုရီးယား အနုပညာရှငျတှကေ ယောငျးတို့နဲ့ မှေးလတူလဲဆိုတာကို မငျမငျနဲ့အတူ ကွညျ့လိုကျရအောငျ…
F4 ကားထဲက ဆံပငျလှိုငျးတှနျ့လေးနဲ့ ယောငျးတို့အသညျးကို လှုပျခတျနိုငျခဲ့သလို City Hunter ဇာတျလမျးတှဲနဲ့ ပရိသတျအားပေးမှုကို ခိုငျခိုငျမာမာရရှိထားတဲ့ ဂူဂြှနျဖွိုးလို့ လူသိမြားတဲ့ Lee Min Ho ကတော့ ဇှနျလ(၂၂)ရကျနမှေ့ာ (၃၂)နှဈပွညျ့တော့မှာ ဖွဈပါတယျ…
Kim Hyun Joong ကတော့ F4 ဇာတျလမျးတှဲမှာပဲ Lee Min Ho နဲ့အပွိုငျ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ယောငျးတို့ ဂြီဟိုလို့သိထားသူလေးပါ.. မငျမငျတို့ ၂၀၀၈ ခုနှဈလောကျက ကွိုကျနှဈသကျခဲ့တဲ့ SS501 အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဂြီဟိုကတော့ ဇှနျလ(၆)ရကျနမှေ့ာ (၃၃)နှဈပွညျ့တော့မှာ ဖွဈပါတယျ…
Secret Garden ထဲက စတနျ့မလေးလို့ ပွောလိုကျရငျ Ha Ji-Won ကို ယောငျးတို့မကျြစိထဲ တနျးခနဲပွေးမွငျကွမှာပါ.. Ha Ji-Won ကလညျးဇှနျလရဲ့ မှေးနရှေ့ငျလေးတဈယောကျပါပဲ… သူ(မ)ဟာ ဇှနျလ(၂၁)ရကျနမှေ့ာ (၃၂)နှဈပွညျ့တော့မှာတော့ Lee Min Ho နဲ့ အသကျသိပျမကှာဘူးပေါ့နျော….
Rain ဆိုရငျတော့ ရှညျရှညျဝေးဝေး ရှငျးပွနစေရာမလိုဘဲ နာမညျမွငျတာနဲ့ ယောငျးတို့တနျးသိမယျ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပါ.. သရုပျဆောငျရာမှာ ပီပွငျသလို သီခငျြးဆိုရာမှာလညျး အငျမတနျထူးခြှနျတဲ့ Rain ကတော့ ဇှနျလ (၂၅)ရကျနမှေ့ာ (၃၇)နှဈပွညျ့တော့မှာပါ..(မထငျရဘူးနျော တျောတျောနုတာပဲ)
Goblin သရဲစုံတှဲထဲက မငျးသမီးလေးဆို ယောငျးတို့ ကောငျးကောငျးမှတျမိကွမှာပါ.. လတျတလောကမှ အပွီးသတျသှားခဲ့တဲ့ Touch Your Heart ဇာတျကားမှာလညျး ပရိသတျအားပေးမှု ရရှိထားတဲ့ Yoon In-na ကတော့ ဇှနျလ(၅)ရကျနမှေ့ာ (၃၇)နှဈပွညျ့တော့မှာ ဖွဈပါတယျ…
ဦးအရှယျကိုရောကျရှိနပွေီဆိုတဲ့ မငျးသားခြော Jin-hee Ji ကတော့ နနျးတှငျးကား တျောတျောမြားမြားမှာ မငျးကွီးနရောက ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သူပါ… သူကတော့ ဇှနျလ(၂၄)ရကျနမှေ့ာ (၄၈)နှဈပွညျ့တော့မှာ ဖွဈပါတယျ….
အောငျမွငျကြျောကွားသူတှကေ ဇှနျလမှာမှေးဖှားကွသလား ထငျမှတျရလောကျအောငျ နာမညျကွီးကိုရီးယား အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားက ဇှနျလမှာ မှေးဖှားကွတာကို ယောငျးတို့ကိုယျတိုငျ တှခေဲ့ပွီးပါပွီနျော…. ယောငျးတို့နဲ့ မှေးလတငျမက မှေးနပေ့ါ တိုကျဆိုငျတာမြိုးတှရေ့ငျလညျး မငျမငျတို့ကို ပွနျလညျဝမြှေပေးခဲ့ကွပါဦးနျော..
Tags: actor, Actress, birth, clebrity news, F4, june, Korea
Ei Mon May 13, 2019